Oge erugo ibuli RSS gị nke ndị nwụrụ anwụ | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 12, 2020 Tọzdee, Nọvemba 12, 2020 Douglas Karr
N'adịghị ka nkwenye ndị mmadụ siri faili ntanetịime ka na-agagharị ihu na ntaneti… ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ụwa ya. Ọdịnaya syndication nwere ike ịbụ na-iwesa ngwa na weebụsaịtị karịa ndị mmadụ na-eji ndepụta na-agụ to ma ohere iji hụ na ọdịnaya gị na-ekesa ma na-ele anya n'ofe ngwaọrụ ka gbakwunyere maka atụmatụ ọdịnaya.
Mara: Ọ bụrụ n ’tufuru gị - lee ihe edere na ya Kedu ihe ndepụta RSS bụ.
Akpata oyi wụrụ m mgbe m lere akaụntụ ochie anyị nke Feedburner iji hụ na a ka nwere ndị ọrụ 9,000 + ndị na-elele ọdịnaya anyị site na ndepụta anyị kwa ụbọchị… wow! Na mgbe m malitere ileba anya na saịtị ndị ọzọ, ha nwere ndị na - agụ 50,000 + na ụfọdụ blọọgụ. Nke a bụ ihe ole na ole anyị meworo iji bulie ndepụta RSS anyị site na ndị nwụrụ anwụ site na iji WordPress.
Jide n'aka na ị nwere biputere thumbnails nyeere na saịtị gị ma gbakwunye mkpado dị mkpa ka isiokwu gị wee nwee onyonyo pụtara. Nke a ga - ekwe omume site na iji WordPress SB RSS ndepụta Plus ngwa mgbakwunye maka WordPress ma ọ bụ ịnwere ike ide ọrụ gị.
Mee ihe FeedPress nke mere na ị nwere ike soro ma tụọ nri oriri gị ma pịa-site na ọnụego, nwere ike hazie URL nri gị, ma kpoo ndepụta gị na ntanetị gị.
Tinye nwebisiinka ma ọ bụ kpọọ ihe na ntọala nke faili ntanetịime gị na a WordPress SEO ngwa mgbakwunye. Anyị na-ejide ndị mmadụ na-ezu ohi ma na-ebipụtaghachi nri anyị oge niile ma ha dara ogbi iji debe ikike nwebisiinka anyị na ya mgbe ha bipụtara ya.
Tinye adreesị ndepụta gị na menu gị ma tinye ya na saịtị gị site na iji akara mba ụwa maka faili RSS.
Tinye nkụnye eji isi mee dị mkpa na isiokwu gị n'etiti isi mkpado ka ngwa na ihe nchọgharị chọta adreesị ndepụta gị, lee koodu maka adreesị ndepụta anyị:
Gbuo Feedburner ma weta FeedPress na Ndụ:
Anyị dọrọ Feedburner ma tinye ya FeedPress na saịtị anyị. Ọ bụ ikpo okwu na-egosi nchịkọta nri zuru ezu na ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ dị ka ike CNAME ndepụta gị ka ị ghara ịdabere na nke ochie ahụ. feedburner URL. Yabụ, enwere m subdomain https://feed.martech.zone setịpụrụ maka ndepụta anyị!
Nke a bụ otu iji tọghata saịtị gị ka ọ bụrụ FeedPress:
FeedPress nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ iji hazie ma bulie ndepụta gị:
Mbipụta Social Media - FeedPress nwekwara ihe ịtụnanya mgbakwunye mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ebe ị nwere ike iwepụta ọdịnaya niile edepụtara ọhụrụ na akpaghị aka n'ofe akaụntụ mgbasa ozi gị niile.
Ndepụta Nri - akuko di elu ma zie ezi banyere otutu ndi debanyere aha gi, ebe, na otu ndi ndi debanyere aha si eri nri gi.
Akwụkwọ Akụkọ Email - Free maka ndị debanyere aha 1000 ma ọ bụ ole na ole. Kwado ihe ngosi akwukwo ha ma jide koodu ntinye aha ha ka itinye ya na saiti gi.
Ntughari nkwuputa - Ifịk ifịk ificationsma Ọkwa via PubSubHubbub gwa ndepụta debanyere aha gị ọhụrụ ọdịnaya.
Nhazi ọdịnaya - Tinye aha na akara ngosi, belata ọdịnaya gị, gbanwee ihe ederede karịa, gbanwee ọnụọgụ isiokwu.
Akwụkwọ asambodo - Mmanye nke SSL iji bulie nnyefe.
Nchịkọta nchịkọta Google - Nchọgharị UTM akpaghị aka mgbe ndị na-agụ nri pịa na saịtị gị.
Formkpụrụ ọzọ - Enwere ike iri nri gị na XML, JSON, ma ọ bụ HTML.
WordPress Nkwụnye - Ọ bụrụ n ’ịnọ na WordPress, ha na - enye ngwa mgbakwunye ka ihe dị mfe!
Banye maka FeedPress
Mara: Agunyela m URL mgbakwunye maka FeedPress - ma kwado usoro ikpo okwu!
Tags: ozorss xmlgbanwee site na feedburner gaa feedpressndepụtaakara ngosi nrifeedburnernrifeedpressnkụnye eji isi mee maka nriesi tinye ikike nwebisiinka na ndepụta gịesi ebipụta na-elekọta mmadụjson nrirss nriakara ngosi rssrss na-elekọta mmadụrss xmlsb rss feed tinyere mgbakwunyeWordPresswordpress plugin
AeroLeads: Chọpụta Anya Adreesị Email na Ntanetị Chrome a